Inona ireo fomba mahery vaika hanamboarana rindran-kira PageRank?
Ny olona rehetra izay mifandray amin'ny tranonkala fanatsarana sy ny marketing maimaim-poana dia mahafantatra hoe inona avy ny backlinks ary ahoana no ahafahany manatsara ny SEO tranonkala sy manangana sehatra domains amin'ny SERP. Na izany aza, tsy ny backlinks rehetra izay zava-dehibe toy ny kalitao iray avy amin'ny tranonkala avo PageRank.
Inona avy ny backlink PageRank avo?
Link Building dia manondro ny dingana iray rehefa mandefa ny tranokalanao na rohy amin'ny blôginao amin'ny tranonkala iray hafa ianao raha sendra mahita ity rohy ity manan-danja ho an'ny mpamaky anao tsy tapaka sy ireo mpitsidika tranokala tsindraindray. Ny pejin-drindrina PageRank avo dia rohy ekena izay avy amin'ny tranonkala manerantany izay mipetaka amin'ny Google robots. Ahoana ny amin'ny fampidirana ny tranokalanao na rohy amin'ny blôgy amin'ny loharano nicheana iray hafa rehefa mijery ny Google Rank and Domain Authority. Amin'izao androntsika izao, dia antsoina hoe lohamilina avo lenta izy io.
Any amin'ny tendrony amin'ny fanentanana fananganana rohy, mila mahita tranonkala nichehina ianao izay mandrindra ny teny fikarohana toy ny sehatra misy anao ary koa ny fandefasana forum, blaogy vahiny na vondrom-bolongana ambony amin'ny hafa mba hahazoana avo PageRank rohy mankany amin'ny tranonkalanao.
Eo amin'ny sehatra manaraka dia mila manamarina ireo hevi-dehibe rehetra ao amin'ilay tranokala na blôgy izay tianao halefina. Afaka mahita rindrambaiko sy fitaovana an-tserasera ianao ao amin'ny tranonkala izay ahafahana manamarina maimaimpoana ny tranonkala. Na izany aza, tsy izy rehetra dia avo lenta. Manoro hevitra anao aho hampihatra ny Semalt Web Analyzer, MozRank, ary Google Pagerank. Ity fitaovana maimaim-poana an-tserasera ity dia hanampy anao hanamarina ny fahafahan'ny tranonkala sy PageRank.
Fomba hahitana tranokala
Ny fanehoan-kevitry ny blôgy dia iray amin'ireo tsotra sy mahomby indrindra hanamboarana rohy ivelany avo lenta amin'ny tranokalanao na blôginao. Afaka mitondra fiara be dia be amin'ny tranokalam-pifandraisana malalaka ianao. Ny zavatra rehetra ilainao dia ny mitady loharanom-baovao izay mifandray amin'ny indostria sy ny orinasa fivarotana. Raha te hahita ny blaogin'ny fanehoan-tranonkala, mila mampiditra ireto fanontana manaraka ireto ianao ao amin'ny boaty fikarohana Google: "ny tenimiafinao inurl:. com, "" tranokala teninao ":. edu inurl: "mamoaka fanehoan-kevitra iray", "tranokala fototra":. gov inurl: blaogy "mamoaka hevitra. "
Ny iray amin'ireo fomba malaza sy mahazatra indrindra amin'ny fananganana backlinks PageRank bilaogy vahiny. Mila mahita blôgy izay mifandray amin'ny lohahevitry ny votoatinao ianao ary manontania momba ny famoahana ny lahatsoratrao ao. Raha ny loharano nofidianao no mahita ny votoatinao ilaina, dia hamoaka izany izy ireo, ary mahazo siramamy fifandraisana tsara ianao ary mahazo fotoana hanatsarana ny fijerinao ny marika. Raha te hahita tranonkala fitorahana bilaogy ianao, dia afaka mikaroka Google amin'ny alalan'ireo fanontana manaraka ireto ianao: "ny teninao" mpanoratra mpanoratra, "ny teny fanalahidy" mpitoraka bilaogy vahiny, "ny teny fototra" ampidiro "na" ny teninao ".
azoko lazaina anao ny fomba ahafahanao mamorona rindran-damba miaro tsara ny pejy ho an'ny blôginao na tranokala anao ary hahitanao ny valin'ny fikarohana. Noho izany, raha te hampitombo ny blôginao na ny toerana misy anao ianao dia hahasoa anao ity fampahalalana ity Source .